Dilaagii ugu halista badnaa Maraykanka oo la ogaaday - BBC News Somali
Dilaagii ugu halista badnaa Maraykanka oo la ogaaday
9 Oktoobar 2019
Lahaanshaha sawirka FBI
Image caption FBI oo soo saartay sawirada dumarka uu dilay Samuel
Hay'adda sirdoonka Maraykanka FBI ayaa xaqiijisay in nin dil ku xukuman oo xabsiga ku jira uu qirtay in uu dilay 93 qof muddo 40 sano ah, uuna yahay qofkii geystay dilkii ugu badnaa taariikhda Maraykanka.
Booliiska ayaa heley cadeymo muujinaya in Samuel Little oo 79 jir ah uu dilay illaa 50 qof, intii u dhaxaysay 1970-kii illaa 2005.
Waxa uu qaadanayaa xukun xabsi daa'in ah laga soo billaabo sanadkii 2012-kii xiligaas oo lagu heley dilka saddex haween ah. Waxa uu ninkan bartilmaameedsanayay dadka tabarta daran, gaar ahaan dumarka madow, kuwaas oo badankood ay ahaayeen dadka jirkooda ka gacansada.
Little waxa uu ahaan jiray feeryahan, sidaas darteedna qofka uu dilayo waxa uu marka koowaad kaga gagabin jirey feer, kadibna cunaha qabana qofka, waxaana taas ka dhasha in qofka la dilay aanan lagu arkin wax astaamo ah oo muujinaya in la dilay, waxaana dhacday in booliiska ay marar badan xukumeen in qofkaas uu iskiis isaga dhintay ama uu daawo iska badiyay.
Christie Palazzolo oo ka tirsan FBI-da ayaa sheegay in inkasta oo Samuel Little uu ku jiro xabsiga,haddane ay muhiim tahay in ay caddaalad helaan dadkii la dilay, lana xiro galalkii baarista ee la furey.
Lahaanshaha sawirka Wise County Jail
Image caption Samuel McDowell
Mas'uuliyiinta ayaa faafiyay 5 kiis oo dheeraad ah oo ka dhacay degmada Kentucky, Florida , kuwaas oo ku saabsan dad maydadkooda la aqoonsanyahay, iyada oo rajadu tahay in bulshada ay sheegi karaan kuwa ay yihiin dadka la dilay.
Waxa kale oo la baahiyay sawirka ninkan, bal haddii ay jiraan dad dhibanayaal ah oo aqoonsan kara wajigiisa, kuwaas oo aanan horey dacwad oga gudbinin.
Muuqaalo ninkan laga duubay oo uu qiranayo dilal uu geystay ayaa iyaguna la baahiyay, waxaana ka mid ah dilka gabadh dhalinyaro ah oo uu ninka dilay sanadkii 1970-kii.
Waxa kale oo uu ka sheekeeyay haweenay uu ku dhex dilay qol ku yaala hoteel, kadibna inta uu gaari ku qaaday uu maydkii ka tuurey meel qaw ah.
Waxaa la sheegay in xusuusta Little ay wanaagsantahay, balse uu hilmaamay taariikhihii uu dilka geystay, taas oo daahisay baaritaanka socda.
Sanadkii 2012-kii ayaa lagu xiray kiis daroogo ah, balse markii dhiigiisa la baaray ayaa la ogaaday in uu yahay ninka geystay dilal 3 ah oo dhacay 1987-dii iyo 1989-kii, kuwaas oo la hayay diiwaankooda.
Kadib waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, iyada oo markii dambe galkiisa loo gudbiyay waax ka tirsan FBI-da oo qaabilsan dambiileyaasha dilalka badan geysta, sidaas ayaana lagu ogaaday dilalka badan ee uu geystay.